Jaamacadda Gollis oo ay ka qalinjebiyeen Dufcaddii u horreysey oo isugu jirta Saraakiil Boolis ah oo Bartay Baadhista Dembiyada iyo Injineerro | Somaliland.Org
Jaamacadda Gollis oo ay ka qalinjebiyeen Dufcaddii u horreysey oo isugu jirta Saraakiil Boolis ah oo Bartay Baadhista Dembiyada iyo Injineerro
January 30, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Dufcaddii u horreysey ee Ardayda wax ka baratay Jaamacadda GOLLIS ee magaalada Hargeysa ayaa qallinjebisey. Waxaana maanta loo sameeyey xaflad ballaadhan oo lagu guddoonsiiyey shahaadooyinka waxbarashadooda, halkaas oo ay isugu yimaaddeen, uguna hambalyeeyeen ardayda qallinjebisey iyo Jaamacaddaba masuuliyiin ka kala socdey golayaasha dowladda, xisbiyada mucaaridka, aqoonyahanno iyo martisharaf kale.
Dufacaddan ka qallinjebisey Jaamacadda Golis oo ka kooban 54 arday, waxay isugu jireen 19 arday oo bartay Injineerinka (Civil Engineer) iyo 36 arday oo ah saraakiil Boolis ah oo iyaguna bartay Baadhista dembiyada iyo shuruucda Booliska.
Xafladdaas oo ay ka qaybgaleen labada Guddoomiyekuxigeen ee Golaha Wakiillada, Mudane Cabdulcasiis Maxamed Samaale iyo Baashe Maxamed Faarax, Guddoomiyaha Xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE, Axmed Maxamed Siilaanyo, xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada iyo Guurtida, Taliyaha Booliska Somaliland Col. Maxamed Saqadhi Dubbad iyo saraakiil kale oo ka socdey Taliska Booliska, aqoonyahanno, ardayda iyo macallimiinta Jaamacadda iyo marti sharaf kale oo aad u fara badan, waxaa si baaxad leh looga hadlay waxbarashada dalka, faa’iidada ay u leedahay dadka iyo dalka iyo kaalinta Jaamacadda Gollis oo si weyn loo bogaadiyey ardaydan ay soo saartay oo lagu tilmaamay mid baahi weyn loo qabey.
Guddoomiyaha Jaamacadda Gollis, Prof. Siciid Axmed Xasan oo ugu horrayn xafladdaas ka hadlay ayaa ka warramay ardayda ka qallinjebisey Jaamacadda Gollis oo uu sheegay inay jaamacaddu bilaash ku siisay ardaydaas waxbarasho laba sannadood ah, taas oo uu sheegay inay bilow u ahayd hab ka duwan jaamacadaha dalka oo ay Jaamacadda Gollis hirgelinayso, isaga oo sheegay inay xoogga saarayaan waxbarasho aasaasi ah oo ku haboon ama waxtar u leh xaaladda dalku iminka marayo.
“Sababta aanu labadaa sannadood waxbarashada bilaashka ugu siinayna waxay ahayd Jaamacadda Gollis way ka duwan tahay Jaamacadaha kale, waxaanu jecelahay inaanu iska du’no oo aanu wax ka duwan samayno,” ayuu yidhi Prof Siciid Axmed.
“Waddankeennu waa waddan yar oo u baahan taageero badan oo u baahan meelo badan in laga daboolo oo wax laga qabto… Meelaha u baahan in wax laga qabtaanna way fara badan yihiin, annagu waxaanu is nidhi wixii waddanka wax taraya wax ka qabta oo daboola. Baahida ugu horraysa ee aanu aragnayna waxay ahayd nabadgelyada waddanka inaanu wax tarno,” ayuu raaciyey Prof. Siciid.
Waxana uu sheegay inay markaa u muuqatay inay tababarka Booliska wax ka qabtaan, waxna ay ka taraan sida dembiyada loo baadho.
“Somaliland dhibaato badan ayaa haysata, nabadgelyada Gudaha waxa la doonayaa in lagu fillaado, ka dibaddana lagu fillaado. Labadiiba haddaan tababar fiican la siin saraakiisha, arrinkaasi wuxuu noqonayaa mid gaabis ah,” ayuu yidhi Prof. Siciid.
Waxa kale oo uu sheegay in meelaha kale ee ay doonayaan inay Jaamacadda Gollis wax ka tarto ay ka mid tahay dhinaca dhismaha, isaga oo sheegay inay soo saareen dufcaddii ugu horreysey ee baratay Injineernimada, kuwaas oo uu sheegay in hadda ay dhammaysteen tababar 2 sannadood ah, isla markaana ay yihiin Injineerro aan buuxin ama “Half Engineers”.
Prof. Siciid waxa sidoo kale uu sheegay inay u qorshaysan tahay Jaamacadda inay bixiso tababarro iyo takhasusyo waxtar leh oo dhinaca Beeraha ah, tayaynta Af-soomaaliga iyo waxbarashada haweenka.
Qaar ka mid ah ardayda Qallinjebisey ayaa iyaguna halkaas ka hadlay oo ka warramay cilmiga ay barteen labadaa sannadood.
Cabdisalaan Cabdi (Diinqale) oo u hadlay saraakiisha Booliska ee dhammaystay tababarka Booliska, ayaa si weyn ugu mahadnaqay Jaamacadda Gollis deeqda waxbarasho ee ay ugu deeqday taas oo uu sheegay inay wax weyn ka tarayso shaqadooda baadhista dembiyada.
Diinqale waxa uu sheegay inay barteen baadhista faraha iyo sidoo kale habka loo baadho dhiigga ama dheecaanka DNA-ga ee lagu ogaado hiddaha ama Jinsiga, balse, waxa uu sheegay in aqoon ahaan uun ay u barteen laakiin, aanay ficil ahaan (practical) u samaynin, maadaama aanu jirin ayuu yidhi Shaybaadh ay ku tababartaan. Waxana uu rajeeyey in dowladda Somaliland ama Jaamacadda Gollis ay u suuragelin doonto Shaybaadhkaas mustaqbalka.
Diinqale waxa uu u mahadnaqay Jaamacadda Gollis oo uu sheegay in bil kasta ay ku kharashgaraynaysey waxbarashadooda $1,200 (Kun iyo Laba Boqol oo Doollar). Waxana uu ballanqaaday in Jaamacadda Gollis iyo ummadda Somalilandba ay u celin doonaan abaalkaas, isaga oo sheegay in aqoonta ay barteen ay wax weyn ka tarayso sidii caddaalad loo heli lahaaa.
Waxana uu ku baaqay in gacan laga siiyo dufcaddooda sidii ay u sii wadan lahaayeen waxbarashadan, ugana qaaddan lahaayeen Decree.
Axmed Xasan oo isaguna u hadlay ardayda baratay Injineerinka ayaa ballanqaaday in waxbarashadoodu ay wax ka beddeli doonto qaabka dhismaha guryaha ee wakhtigan oo uu sheegay inuu qaali yahay, isaga oo sheegay inay daraasad ku samayn doonaan sidii dadku u dhisan lahaayeen guryo qiimahoodu jaban yahay. Waxa kale oo uu sheegay inay wax ka tari karaan waddooyinka iyo biyaha.
Taliyaha Booliska Somaliland, Col. Maxamed Saqadhi Dubbad ayaa isaguna xafladdaasi ka hadlay waxana uu u mahadnaqay Jaamacadda Gollis tababarka ay ugu deeqday Booliska oo ah deeqdii u horreysey ee nooceeda ah.
Taliyuhu waxa uu sheegay inay dedaal badan ugu jiraan sidii booliska Somaliland u heli lahaa tababarada ay u baahan yihiin si ay shaqadooda u gudan karaan. Waxa uu sheegay in dal deriska ay tababar ugu direen saraakiil Boolis ah.
Waxa kale oo uu sheegay in Canada iyo Sweden ay u ballanqaadeen booliska Somaliland deeq waxbarasho, isaga oo xusay hay’ado kale oo iyaguna caawiya Booliska sida UNDP.
Xafladdaasi waxa ugu dambayntii ka hadashay Marwo Edna Aadan Ismaaciil, Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Somaliland, oo hadalo dardaaran iyo waano ah u jeedisey saraakiisha Booliska, iyada oo sheegtay in aqoonta ay barteen laga filayo inay ka dhigto Booliska Somaliland mid la saaxiiba dadweynaha, ilaaliya caddaaladda iyo sharciga, isla markaana beddela fikradda laga qabo Booliska.
Waxa kale oo ay sheegtay Marwo Edna in Somaliland wax ku qaadato xaaladda ka jirta gobolka iyo dalalka deriska la ah.
Wasiirkuxigeenka Caddaaladda Yuusuf Ciise Tallaabo oo uu ka wakiil ahaa Madaxweynekuxigeenka, mudane Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa ardayda guddoonsiiyey shahaadooyinka. Waxa kale oo shahaado sharafyo lagu guddoonsiiyey xafladdaas Madaxweynekuxigeenka, Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Ismaaciil Aadan Cismaan iyo xubno kale oo kuwaas oo lagu maamuusay gacantii ay ka geysteen hirgelinta Jaamacadda Gollis.